Vorona vita amin'ny lokanga miloko "Motsika mavokely" - Mili Mili
Home > Akorandriaka vita amin'ny kofehy vita "Pink"
Akorandriaka vita amin'ny kofehy vita "Pink"
Fanitso vita amin'ny akorandriaka miendrika akorandriaka dia toy ny haingoana kely ao amin'ny efitran'ny ankizy ary amin'ny fotoana mitovy lokony na akorandriaka tsotra fotsiny. Mihantona eo amboninny kofehy vita ny akorandriaka, izay mahamora azy ny mampifatotra azy amin ny lay, kanopi na kotrana. Ny haingon-trano dia feno feno malefaka. Mampirisika anao izahay hamorona garland avy amin'ireo volavolan-doko amin'ny lokonay.
Ny pendant rongony moimili dia karazana rindrina amin'ny rindrina izay ahafahanao manoritra mora foana ny efitrano ankizy.
Ny pendant dia apetraka amin'ny kofehy vita amin'ny landy ary voaravaka vakana hazo. Ny kofehy amin'ny lafiny roa, feno insulation, noho izany dia malefaka sady mahafinaritra amin'ny fikasika.
Ny haben'ny lokona 18 cm x 15 cm.
Fitaovana: landihazo, landy madio, garland, lamba, lamba volon-koditra, lamba vita amin'ny voajanahary
Default Title - PLN 25.00 PLN